बलिउडका चकेलटी हिरो रणवीरको अनुमानित सम्पत्ति कति छन् ? - Everest Dainik - News from Nepal
बलिउडका चकेलटी हिरो रणवीरको अनुमानित सम्पत्ति कति छन् ?
२०७४, १० पुष सोमबार
पुस १० । बलिउड चलचित्रका चर्चित चकलेटी हिरो रणवीर कपुरको जन्म एक फिल्मी परिवारमा भएको थियो ।
उनका पिता ऋषि कपुर र आमा नितु कपुर बलिउडका चर्चित कलाकारहरु हुन् । उनको परिवारका प्रायःसबै सदस्यहरु फिल्मी क्षेत्रमा रहेका छन् ।
पढाइप्रति चासो कम हुँदै गएपछि उनले फिल्मी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने निर्णय गरे । फिल्म अध्ययनका लागि उनी अमेरिका हानिए । उनले लि स्ट्रासबर्ग इन्सिटुटमा फिल्म मेकिङबारे अध्ययन गरे ।
याे पनि पढ्नुस फिरङ्गी चलचित्र बक्स अफिस कलेक्शन : कपिल शर्माले सोचेजस्तो दर्शकहरुलाई हँसाउन सकेन
उनले सर्ट मुभी प्यासन टु लवमा काम गरे । यस फिल्मको निर्देशन समेत आफैले गरे । त्यसपछि उनको बलिउड यात्राले रफतार लिने काम गर्यो । फोर्ब्सका अनुसार उनको आम्दानी १५ मिलियन डलर रहेको छ । उनको कुल नेटवर्थ ४० मिलियन डलर रहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस मृत्युपछि श्रीदेवीको इच्छा पूरा, राष्ट्रिय अवार्ड थाप्न स्टेजमा बाेनी कपुर
कृष्ण राज बंगला, बान्द्रा १६,०६८ डलर सन् १९८० मा किनिएको यो पारिवारिक घर हो । कपुर परिवारले आफ्नो बंगला परिवर्तन गरेर १५ तल्ले बिल्डिङ बनाउने योजना बनाइरहेको छ।
बास्तु बिल्डिङ, पाली हिल, बान्द्रा ५.१ मिलियन डलर ट्रम्प टावरमा अपार्टमेन्ट १.९ मिलियन डलर
याे पनि पढ्नुस टेलिचलचित्र ‘मुस्कान’को चर्चित अभिनेत्री एरिनाले आफ्नो यस्तो रहस्य खोलिन्
अउडी ए८ १.१८ करोड भारतीय रुपैयाँ
२००९ रेन्ज रोभर १.२ करोड भारतीय रुपैयाँ
अउडी आर८ २.५५ करोड भारतीय रुपैयाँ
मर्सिटीज बेन्ज जि६३ एमजी १.४५ करोड भारतीय रुपैयाँ
हार्ले डेबिडसन फ्याट बोए १५.५ लाख भारतीय रुपैयाँ